Uthotho lokunkcenkceshela uthotho lwee-FAQ -Baoding Mingwang Irrigation Equipment Co, Ltd.
Ndidinga isihluzo sonkcenkceshelo lwedriphu?
Ewe. Yonke iinkqubo zokunkcenkceshela ukuba ne isihluzo. Nokuba acocekile kangakanani amanzi akho, a isihluzo i-inshurensi enexabiso eliphantsi ukukhusela kubutyobo obungena kwi inkqubo yokunkcenkceshela. Nokuba amasuntswana amancinci emanzini anokubangela Ukuvuza Ukukhupha kuya kugqitywa.
Loluphi ulwalathiso umbala wemarko ojongane nalo xa ufaka?
Jongana phezulu, ukuze indawo ejonge kuyo amanzi ijonge ukuthintela udaka, isanti kunye nokhula ekungeneni.
Ngaba kufuneka ndigungxule inkqubo yam emva kokuba ndichumise?
Njalo ukugungxula i inkqubo emva kokuchumisa ukugcina ngokufanelekileyo eyakho inkqubo yokunkcenkceshela. Oku kubaluleke ngakumbi xa usebenzisa i-organic izichumisi.
Ndiyigungxula njani inkqubo yonkcenkceshelo yedriphu?
Ukuhlamba i inkqubo ngamanzi acocekileyo ngolu hlobo lulandelayo: ukugungxula iindawo eziphambili kuqala, emva koko zinemigca emininzi kwaye ekugqibeleni Ukuvuza imigca ngokuvula imigca eliqela ngexesha (umzekelo: imigca elishumi) ukuze kugcinwe uxinzelelo olwaneleyo ukuze ube namandla ukugungxula. Ukuhlamba imigca emalunga nomzuzu omnye okanye ade acace amanzi.
Uthini umahluko phakathi kwethape yedriphu kunye nomgca wethontsi?
Umgca wokuvuza iyafana ne iteyiphu yokwehla kuba ineemitters zamanqanaba okukhupha ahlukeneyo afakelweyo ngokulinganayo, nangona kunjalo ukufana kuyeke apho. Ngokungafaniyo iteyiphu yokwehla, umgca wokudriphu Inqunyelwe kubude kwimida efanayo yeetyhubhu ezininzi zobungakanani obuhambelanayo
Ungabala njani uMjelo wonkcenkceshelo lwedriphu？
(1)Yandisa inani lezinto ezikhutshiweyo yi-GPH ukufumana itotali yakho ukunkcenkceshela inqanaba lokuhamba, ukuba zonke i-emitters zakho zinenqanaba elifanayo le-GPH.
(2)Umzekelo, ukuba uneemitters ezingama-20 zonke ezinenqanaba lokuhamba kwe-2 GPH, iyonke ukunkcenkceshela Ukuhamba kwenqanaba yi-40 GPH (20 emitters x 2 GPH = 40 GPH iyonke).
Ngaba ii-emitters ze-drip ziyenyuka okanye zihle?
Nokuba yeyiphi indlela okhetha ukuyifaka iteyiphu yokwehla Nceda uqinisekise ukuba Ukukhupha ubuso phezulu. Oku kunciphisa ukuvaleka okubangelwa kukufunxa ukungcola kunye nenkunkuma kwindawo evaliweyo-phantsi. Rhoqo ukugubungela iteyipu ngee-intshi ezimbalwa zomhlaba okanye i-mulch iluncedo kakhulu.
Ithatha ixesha elingakanani i-tape?
Ixesha elingakanani Ngaba i Itheyiphu yokuvuza yokugqibela? 8-mil iteyiphu yokwehla isetyenziswa kube kanye kwaye ilahliwe. I-10-mil iteyipu isetyenziselwa umhlaba onamatye okanye izityalo ezingaphezulu komhlaba. I-15-mil iteyipu ihlala ilungile kangangeminyaka emi-3-5 njenge nde njengoko isihluzi kunye nomlawuli basebenza ngokufanelekileyo.
Ndingayisebenzisa kwakhona iteyiphu yedriphu?
Ukuba awukhuli unyaka wonke egadini wena unokuphinda usebenzise i iteyipu kwixesha elizayo lokukhula. Qiniseka nje ukuba uhlamba konke ukufakwa kwaye ususe ngokufanelekileyo umhlaba kunye negrit kwi-nut ejikelezileyo kunye ne-barb ukuze zisebenze kakuhle ngexesha elizayo xa uzisebenzisa.
Ngaba iteyiphu yedriphu ingangcwatywa?
Iteyiphu yokuvuza inakho kuba wangcwatywa ukuya kwii-intshi ezintandathu ubunzulu emhlabeni. Uhlala engcwaba eyakhe kuphela iteyipu malunga nee-intshi ezintathu ukuya kwezine ubunzulu bomhlaba.
Ungayifihli njani iteyiphu yedriphu?
Vula ivalve yesango kumthombo wamanzi okanye xa usebenzisa impompo yamanzi, vula impompo yamanzi usebenze ukunkcenkceshela Inkqubo kangangeyure. Oku kuyakuqinisekisa ukuba isisombululo samanzi esine-asidi singeniswa kwinkqubo ngokusebenzisa eyona nto iphambili kwaye oku kuyakucoca ukwakhiwa kwebacteria ngaphakathi kwenkqubo.
Ngaba imigca yedriphu iyatshixa?
Ngelishwa, i-tubing kwi Inkqubo yedriphu inokuvaleka ngamaminerali okanye ngokwakhiwa kwebacteria. Ukucoca ifayile ye- inkqubo ngamanzi ubuncinci amaxesha ama-3 ngexesha lonyaka unako ukukhupha izithintelo ezincinci kunye nokuthintela ii-clogs ekubeni zenzeke kwasekuqaleni. Ukuba eyakho inkqubo imisiwe ngokwenyani, kungafuneka ukugalelwa iasidi
Ndingayifihla njani inkqubo yokunkcenkceshela?
1.Kuqala qiniseka ukuba ujika kwisitshizi inkqubo ukunqanda izehlo.
2.Okulandelayo kuya kufuneka ususe yonke imibhobho kunye neentloko zokufefa.
3.Emva koko vula amanzi kwaye uvumele ukuba abaleke de amanzi aphume kwintloko nganye evulekileyo ukukhupha nayiphi na inkunkuma ngaphakathi kwesitshizi iinkqubo
Nguwuphi umahluko phakathi kwetripline kunye nedrip tape?
Yeyiphi engcono drip tape okanye umgca drip?
Xa ubude obude bufuneka, njengokulima okanye izicelo zokuhlala ezinde, iteyiphu yokwehla ihlala isisombululo. Iteyiphu yokuvuza ihlala isetyenziswa kwizicelo zoxinzelelo oluphantsi, isebenza ngokugqibeleleyo kwi-8-15 PSI. Ngelixa iteyiphu yokwehla inokusetyenziswa kubude obude kune-poly tubing kunye umgca wokudriphu, ayinasiphelo ngokupheleleyo